Kuyini umpheki isobho eyodla? Lo mbuzo azibuze nsuku zonke wesifazane. Ufuna isidlo sasimnandi futhi ewusizo ngesikhathi esifanayo. Kulokhu ukhetho ekahle, ngokubona ochwepheshe abanolwazi, kuyinto isobho corn. Ungadliwa ekuwulungiseleleni kufanele ezihlukahlukene. Ngakho-ke, ngamunye ithuba ukhethe ezifanele kakhulu.
Quick futhi esihlwabusayo
Ekuphileni kunezimo lapho singasekho isikhathi esanele kwasemini. Kulokhu, uzodinga isidlo ezokwenza ngokushesha ukuxazulula inkinga. Ungakwazi ukupheka elula kakhulu, kodwa yokuqala ngokwanele corn isobho. Ungadliwa we plan ngezinye izikhathi abizwa ngokuthi "washesha." Ukuze uqinisekise ukuthi:
litre umhluzi 3 amazambane, 2 isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, chive, 30-40 amagremu kafulawa, izaqathe, ingilazi yobisi (noma ukhilimu), usawoti, onion 2, 40-50 amagremu amafutha yemifino, 5 wezipuni uphizi oluhlaza nommbila futhi ngayinye a pepper kancane black.
isobho zokupheka ubuchwepheshe:
Okokuqala, udinga ukwenza imifino. anyanisi Bahlanza futhi ehlutshiwe uthathe cubes ezincane. Kungokufanayo kwenziwa isanqante. Isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi oqoshiwe izindandatho, nesweli - nje inyama egayiwe.
amafutha yemifino is batheleka ebhodweni bese kancane kancane uwulethe ngamathumba.
Engeza nalokho anyanisi isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, abanye usawoti ukuthuthukisa ukunambitheka kanye ukuthosa imizuzu 5 emlilweni ophansi.
Balale kuya izaqathe kanye ukuqhubeka ukupheka ukudla imizuzu 5-6.
Faka garlic kanye pepper. Ngemva kwalokho, kubalulekile ukulinda 1 iminithi.
Fafaza zonke kafulawa uhlanganise kahle. Kulesi Ukwakheka, kumele imikhiqizo ethosiwe ngisho nanhlanu imizuzu.
Ngalesi sikhathi, ungakwazi ikhasi wanquma amazambane zibe cubes.
Thela imifino umhluzi. Uma kungenjalo, khona-ke ungasebenzisa ubisi evamile.
Ngemva amazambane yakhe abilayo ukuzumeka. Pheka cishe imizuzu engu-15.
10. 3 imizuzu ngaphambi kokuphela kwenqubo ukwethula umumbu uphizi. Futhi kungaba fresh, eqandisiwe noma okusemathinini.
It kuvela elula kakhulu, kodwa ngempela esiphundu isobho corn. Ungadliwa nale sethi imikhiqizo ezifaneleke ngisho inyama. Futhi abanye abantu abakwazi emizuzwini embalwa kamuva, uthole injabulo enkulu.
Ekwindla, lapho kuyinkathi mushroom, wonke umuntu ufuna ehlathini Thenga izipho zakhe. Ngoba abakhileyo ezweni lakithi sekunesikhathi eside umkhuba. Khona-ke wonke unyaka sizokwazi ukuzijabulisa wena ezihlukahlukene izitsha ezithakazelisayo. Ngokwesibonelo, kubalulekile ukuzama ukupheka isobho nge amakhowe corn. Ungadliwa ezisebenzisa imikhiqizo ihlathi, njalo sivuse isithakazelo esijulile. Kulokhu, uzodinga elandelayo imikhiqizo eziyisisekelo:
2 amazambane ezinkulu, 200 grams amakhowe (noma ezinye isikhunta), usawoti, 2 uJakobe futhi 200 amagremu fresh corn eqandisiwe, onion, pepper, izaqathe, u-cauliflower nengxenye futhi isipuni utamatisi unama obukhulu.
Indlela ukulungiswa isobho ithakazelisa kakhulu:
Bilisa isikhwebu sommbila, bese ngobumnene ukwehlukanisa imbewu ngommese.
Izaqathe kanye amazambane ikhasi sibe yimichilo ezinkulu.
Iklabishi ukuhlukana ku florets.
Sidilike anyanisi Diced, bese ethosiwe by amafutha.
Engeza pan sihlanza kahle wageza futhi uthathe mncane tincetu amakhowe.
Esikhathini pan uthele amanzi. Ngemva abilayo, wakufaka corn, izaqathe kanye namazambane.
Uma imifino Sekukancane, engeza anyanisi athoswe amakhowe futhi iklabishi.
Ekugcineni, ukubeka i-pasta kanye nekhava izinongo.
isobho Ready kufanele kube phisa kancane. Ngakho-ke, kufanele amboze futhi ushiye imizuzu 10.
Isobho nge meatballs
Inyama akunakwenzeka bonakalise futhi isidlo sokuqala. Ungabona lokhu uma ungeza meatballs kuya isobho nge corn oluthile lokudla. Indlela ulula futhi ayidingi umpheki noma yimaphi amakhono akhethekile Culinary. Okokuqala kudingeka alungiselele zonke izithako ezidingekayo:
15 amagremu zommbila oluthile lokudla futhi inani elifanayo ibhotela, ama ezimbili 70 amagremu of yenkomo, usawoti, amaqanda, umfire leaf, izaqathe kanye parsley 3 amahlumela ngesikele sokuthena.
I nahlanza isanqante oqoshiwe onion brown emafutheni.
Epanini, ubilise amanzi bese wengeza naso oluthile lokudla wageza upheke kuze cishe kuphekwe.
Beka i-pan ethosiwe imifino. Khona-ke inkathi ngosawoti baphonsa ku pan iqabunga bay.
Ngalesi sikhathi, inyama kanye anyanisi kufanele ochotshoziwe grinder inyama.
Faka iqanda, futhi ushukumisa mass umphumela izimpumputhe meatballs kancane kucocekile.
Podvarit kubo imizuzu embalwa ngamanzi abilayo.
Ngaphambi sikhonza meatballs, okokuqala kufanele abeke endishini, bese uthele isobho emuva ngobuningi wafafaza zonke amakhambi fresh oqoshiwe.
Ngokucophelela ukhilimu isobho
Abalandeli Izingxube obukhulu kufanele uthanda corn isobho. Iresiphi, ngawo ukulungele, kuhlanganisa izinto ezilandelayo:
400 amagremu eqandisiwe noma okusemathinini corn yasebhange 1, 2 amazambane, 0.5 amalitha amanzi noma yemifino umhluzi, usawoti, isanqante, tsp curry, 35 amagremu samafutha zemifino kanye namakhambi.
Izindlela sokulungiselela izitsha:
Izaqathe kanye amazambane kumelwe sihlanzwe, ukugeza ngase uthathe cubes ezincane, emapheshana noma tincetu ukuma ngaphandle kokubonisana nomkayo.
ukudla Ukulungele walala epanini ngamafutha eshisayo futhi kancane Fry kwabo ngaphandle kokulinda ukuba ukuhwalala we ebusweni. Le nqubo ekugcineni uyobapha ngesandla ukunambitheka isobho okuphelele licace okuningi futhi ethambile.
Thela imifino amanzi (noma umhluzi) futhi imenze isisindo ngamathumba. Uma umsebenzi isetshenziswa corn eqandisiwe, khona-ke kufanele wengeze kulesi sigaba.
Qhubeka ukupheka kuze imifino athambe kahle. Endabeni corn okusemathinini kufanele sinikezwe imizuzu 5-6 ngaphambi Ukuvalwa.
Ingxube ukuthi nepepper in a blender, kuze ngeke liyafana puree eyohlobo.
Engeza usawoti kanye Bilisa isobho futhi, bese ngokushesha usisuse ukushisa.
Indishi ngokuvamile ipuleti ehlotshiswe amakhambi fresh. Abalandeli pohrustet ungakwazi ukwengeza ezinye crackers.
Abantu abaningi bathanda ngempela isobho corn. Indlela kuthi akufane nokwenzeka inguqulo yangaphambilini. Sidinga eziningi imikhiqizo efanayo esikhathini isilinganiso ezilandelayo:
450 amagremu sezikhwebu 1 onion, chive 3, izaqathe, 700 ml ubisi, ingilazi yamanzi, 35 amagremu samafutha zemifino, emabhamuta pepper, usawoti kanye ezinye izinongo (pepper, pepper).
Esikhathini kulungiselelwa lokhu isidlo has izici zayo siqu:
Ngezindlebe uyonquma imbewu, kuyilapho bona walala lwesikhwebu epanini ezijulile futhi uthele ubisi.
Umthamo ukubeka phezu komlilo, ukuletha okuqukethwe ukuze ngamathumba, bese ukunciphisa elangabini bese ukuphela imizuzu 8.
Ezinqumela usike imifino asele. Ifomu izingcezu kulokhu akunandaba.
On epanini ukuthosa ngamafutha eshisayo bayeke ukuba ensundu anyanisi imizuzu emithathu.
Engeza asele imifino, usawoti kanye pepper kanye ibila, embozwe imizuzu 5.
UJakobe ukusuka ubisi ukulahla. Basuke ayisadingeki.
Epanini ne ubisi kudlule imifino steamed upheke kubo ngaphansi lid on ukushisa low imizuzu 20.
Ngemva ingxube kufanele kuphole, nepepper in a blender, bese uwulethe ngamathumba.
isobho Ready kungenziwa batheleka nezitsha, ngokubeka ngamunye wabo amaningi njengoba hlamvu ambalwa corn abilisiwe.
AmaShayina kakhulu othanda ukupheka corn isobho nge inkukhu. Indlela kunalokho eziyinkimbinkimbi, ngakho Sebawoti ngeke kube lula Wabasaqalayo. Ngaphezu kwalokho, kuzothatha ngempela eziningi ezihlaba umxhwele imikhiqizo:
2 inkukhu amabele, onion, corn uJakobe 4, usawoti, 30 ml amafutha yemifino, 4 amasentimitha ginger impande, 50 ml usoso wesoya, amaqanda 2, 15 amagremu isitashi, oyster sauce isipuni (uyazikhethela) kanye nengxenye cilantro uvumelanise.
Inqubo yokulungiselela isobho:
UJakobe ukugeza, uwafake epanini, engeza amanzi bese upheka kuze ithenda.
Eceleni Fry uwoyela inkukhu webele. Ngaphandle, inyama kufanele redden kancane. Ngemva kwalokho, kubalulekile ukuba uthole futhi ubeke eceleni isikhathi esithile kuze kube sohlangothini.
Esikhathini pan efanayo ukugcwalisa anyanisi ochotshoziwe, garlic kanye ginger ogayiwe. Imikhiqizo usawoti kancane futhi umpheki, ibangele njalo.
Thela amanzi ezisele ngemuva ukupheka corn. Ngemva abilayo, engeza inyama futhi sauce soy.
Okusanhlamvu asuswe ihleza.
Uma inyama usulungile ngokuphelele, kufanele ekhishwe wembatha ipuleti.
Esikhathini pan efanayo bayeke corn futhi uthele oyster sauce. Massa nokho ubilise futhi.
Engeza ke izinsalela isitashi nge sauce soy, bese kancane ukwethula amaqanda pre-washaywa.
I isobho usulungile. Manje udinga kuphela ukuhlola inani usawoti futhi ngokushesha ezilungele ukudliwa.
A gourmet indlela corn ukhilimu isobho nge nezimfanzi. Indlela elula kakhulu futhi kufinyeleleke cishe wonke umuntu. Isinyathelo sokuqala ukuba zinakekele indlu kukhona imikhiqizo ezidingekayo. Udinga:
namalitha nengxenye inkukhu isitokwe 1 onion, 500 namamililitha ukhilimu, izaqathe, 350 amagremu of imfanzi ehlutshiwe, 1 yasebhange zommbila okusemathinini, ibhotela ½ ithisipuni turmeric.
Ukulungiselela isobho kuthatha isikhathi esincane kakhulu:
Okokuqala, u-anyanisi oqoshiwe kanye isanqante ogayiwe kudingeka Fry epanini.
Engeza ummbila ne brine imizuzu okungenani angu-10.
Esikhathini pan uthele isitokwe futhi uwulethe ngamathumba. Ngemva kwalokhu shift isanqante and corn ingxube.
Engeza turmeric, usawoti, ukhilimu bese ukuphela imizuzu engaba 10.
Imbiza beat ubebushelezi. Ngenxa yalesi ukucwiliswa blender ekahle.
Uhlobo okuholela ingxube ngokusebenzisa ngesihlungo, enezele futhi nezimfanzi. Pheka ukudla ndawonye imizuzu 10-15.
Lokhu elimnandi isobho injabulo wonke umuntu lucky ngokwanele ukuyizama.
Ukholifulawa isobho. zokupheka
Wedding izicathulo - ingubo yomshado Ikhaya Izesekeli.
Nesineke abanomfutho wegazi ophakeme kuyinto ... kanjani umfutho womoya iziguli abanomfutho wegazi ophakeme